Card Games ဖဲကစားနည်း Archives - Myanmar Online Game
Card Games ဖဲကစားနည်း
Poker အသုံးအနှုန်းနဲ့ Slang များ
Khin Hsu July 23, 20200Comments
စည်းမျဉ်းတွေနဲ့ အိမ်ကောင်းမကောင်း အပြင်ကို တစ်ကမ္ဘာလုံးကြိုက်နှစ်သက်ကြတဲ့ဒီ ပိုကာ ကစားနည်းမှာ အများကြီးရှိပါသေးတယ် Poker ကိုအပြည့်အဝခံစားပြီး ကစားချင်ရင် သူ့ရဲ့ဘာသာစကားကိုတော့ သိထားသင့်တာပေါ့ ပိုကာ ကစားဝိုင်းတစ်ခုမှာ အသုံးပြုလေ့ရှိတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေ, Slang တွေအများကြီးရှိပါတယ် ဒီလိုအသုံးအနှုန်းတွေက ကစားပွဲနဲ့နေရာအပေါ်မှုတည်ပြီး အများကြီးရှိတယ်ဆိုပေမယ့်လဲ ဒီနေ့မှာတော့ လုံးဝမသုံးမဖြစ် သုံးရမယ့် စကားလုံးတွေကို လေ့လာလိုက်ကြရအောင်! အကုန်လုံးကိုမှတ်မိမနေရင်တောင်မှ ကစားနေရင်း လာပြန်ဖတ်ပြီးတော့ သိလို့ရတာပေါ့ …
Card Games ဖဲကစားနည်း Casino ကာစီနိုဂိမ်းများ
Khin Hsu April 20, 20200Comments
ပထမဆုံး ကာစီနို ဟာ ကစားသူတွေကို ပထမဆုံးအနေနဲ့တံခါးဖွင့်ပြီးကြိုဆိုခဲ့တာ နှစ်ပေါင်း 400 နီးပါးလောက်ရှိပါပြီ။ အဲ့အချိန်ထဲကနေစပြီးတော့ အခုခေတ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် Casino ဆိုတဲ့ Concept က ကြီးကြီးမားမားပြောင်းလဲမှုမရှိပေမယ့်လည်း အခုခေတ်မှာတော့ Online Casino ကစားနည်းတွေကိုပါ ကိုယ်တွေရဲ့နေအိမ်ထဲမှာပဲ ကစားလို့ရနေပါပြီ။ ဒါတွေအကုန်လုံးက ဘယ်ကအစပြုခဲ့တာလဲ? ပထမဆုံး ကာစီနို ကိုသွားခဲ့တဲ့ ကစားသူတွေကရော ဘယ်လိုကစားနည်းတွေ ကစားခဲ့ကြတာလဲ? Italian…
Texas Hold’em ပိုကာမှာ ပြုလုပ်မှုများတဲ့အမှားများ
Khin Hsu April 9, 20200Comments
ပိုကာ ကစားတဲ့နေရာမှာ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ကစားပုံဆိုပြီးမရှိပါဘူး။ သင်ဟာဘယ်လောက်ပဲ ကျွမ်းကျင်မှုရှိရှိ နောက်ထပ်လေ့လာစရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ သင်ဘယ်လောက်လေ့လာထားထား အထူးသတိပြုရမယ့် အခြေခံအချက်လေးကို အာရုံမစိုက်မိရင် အမှားတစ်ချက်ကရှုံးနိမ့်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးထဲမှာတော့ Texas Hold`em ပိုကာကစားတဲ့နေရာမှာ ကစားသမားတွေပြုလုပ်မှုများတဲ့ အမှားတွေကို ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပြီး ဒါတွေကို ရှောင်ကြဉ်နိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအမှားတွေထဲမှာ ကျွမ်းကျင်တဲ့ ပရိုဖက်ရှင်နယ်ကစားသမားတွေတောင် တစ်ခါတစ်ရံ သတိမမူမိပဲမှားတတ်တဲ့ အမှားတွေပါဝင်တဲ့အတွက် ဒါတွေကိုသင်ခန်းစာယူ လေ့လာထားသင့်ပါတယ်။ …
Khin Hsu April 3, 20200Comments
Blackjack ကစားတဲ့အခါမှာ Card Counting လုပ်တတ်တဲ့သူက တစ်ကယ့်ကိုအသာစီးရတာကြောင့် အသုံးဝင်တဲ့ Skill တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးကိုအများကြီးတိုးစေမှာပါ။ တစ်ချို့ကတော့ Card Counting ကမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ကြပေမယ့် Card Counting စလုပ်ဖို့အတွက် လွယ်ကူစေမယ့် အကြံပေးချက်လေးတွေပြောပြချင်ပါတယ်။ တစ်ခုပဲသတိထားဖို့က Card Counting ကို Casino တော်တော်များများနဲ့ အပြင်ကစားဝိုင်းတွေမှာအတော်မုန်းကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကိုယ်ကတတ်သွားပြီဆိုရင်တောင် စိတ်ထဲကပဲလှုပ်ရှားတက်ဖို့လိုတယ်နော်! အမြဲတမ်းလိုက်လေ့လာနေပြီးတော့ မှန်ကန်တဲ့…
Card Games ဖဲကစားနည်း Casino ကာစီနိုဂိမ်းများ Uncategorized
Bingo ကစားရန်နည်းလမ်းကောင်း (၃)ခု
Khin Hsu January 31, 2020 1 Comment
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ…..မိတ်ဆွေအနေနဲ့ ကာစီနိုဂိမ်းများထဲမှ ကဒ်နဲ့ကစားရသည့် ဂိမ်းမည်မျှလောက် သိပါသလဲ? ၄င်းထဲမှ မိတ်ဆွေအနေနဲ့ ဘယ်နှခုကစားလေ့ရှိလဲ? ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ မိတ်ဆွေအတွက် Card Game တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Bingo ဂိမ်းအကြောင်းလေးကို မိတ်ဆက်ပေးပါရစေနော်။ (၁) ဂိမ်းကသတ်မှတ်ထားတဲ့ စည်းကမ်းချက်အတွင်း ကဒ်များကို ရနိုင်သလောက်ဝယ်ယူပါ Bingo ဂိမ်းရဲ့ကစားကောင်းနည်းလမ်းများထဲမှာ မိမိကိုယ်မိမိ အထာကျကျ ကစားတတ်ခြင်း ကလည်း အဓိကအချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုကစားနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင် မိတ်ဆွေအနေနဲ့…
Dragon Tiger ဘယ်လိုဆော့မလဲ?
Khin Hsu January 25, 20200Comments
Dragon Tiger ဆိုတာများသောအားဖြင့် Asian ကစားသမားတွေကို အဓိကအားဖြင့်ဆွဲဆောင်နေတဲ့ ကစားနည်းဖြစ်ပြီးတော့ အထူးသဖြင့် Online Casino တွေမှာဆိုရင် အပြင်မှာလိုမဟုတ်ပဲ ပိုပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်ကစားနိုင်ပြီးတော့ Dealer နဲ့လဲ အချိန်နဲ့တပြေးညီ Live ကစားနိုင်တဲ့ ကစားနည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကစားနည်းမှာတော့ ကစားသူတွေက ဒိုင်နဲ့ယှဉ်ပြီးကစားရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ပြောရရင်တော့ သူ့ရဲ့ကစားနည်းက Baccarat နဲ့ဆင်တူပါတယ်။ ကစားသူတွေက ဘယ်ဘက်အိမ်ကပိုပြီး ကဒ်တန်ဖိုးကြီးမလဲဆိုတာကို ခန့်မှန်းရမှာပါ။…
Blackjack မှာဘယ်အချိန် ၂အိမ်ခွဲသင့်လဲ?
Khin Hsu September 19, 20190Comments
Split ဖဲကစားနည်းရဲ့ လူဆော့အများဆုံးနဲ့ အလွယ်ဆုံးလို့သတ်မှတ်လို့ရတဲ့ Blackjack ကစားနည်းမှာ ကိုယ့်ရဲ့ဖဲကို၂အိမ်အဖြစ်ခွဲလို့ရတဲ့အခြေအနေတွေရှိပါတယ်။ ၂အိမ်ခွဲလိုက်မယ်ဆိုရင် ၂အိမ်လုံးအတွက်ကို ဖဲချပ်တစ်ချပ်စီထပ်ဝေမှာဖြစ်ပြီးတော့ ကိုယ့်လောင်းကြေးအတိုင်းပဲ ၂အိမ်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် လောင်းကြေး၂ဆဖြစ်သွားမှာပါ။ တစ်အိမ်ချင်းစီကိုပုံမှန်စည်းမျဉ်းတွေအတိုင်းပဲ တစ်လှည့်ချင်းဆော့သွားရမှာပါ။ ၂အိမ်လုံးသာနိုင်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင် ၂အိမ်စာလျော်ကြေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ့်လောင်းကြေးထက် ၂ဆပြန်ရမှာပါ။ တစ်ကယ်လို့တစ်အိမ်ပဲနိုင်ခဲ့ရင်တောင် အရင်းပြန်ကြေသွားပြီလေ။ ဒါပေမယ့်လဲရှုံးသွားခဲ့ရင်တော့ လောင်းကြေးထက်ကို ၂ဆကိုယ်ကရှုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ့်အတွက် အမြတ်အများဆုံးရဖို့အတွက် ဘယ်အချိန်မှာ ၂အိမ်ခွဲသင့်လဲဆိုတာကို ဒီနေ့မှာလေ့လာလိုက်ကြရအောင်! Ace(A)…
ရှမ်းကိုးမီး ကို စနစ်ကျကျ ဘယ်လိုဆော့ရမလဲ?
Khin Hsu September 10, 20190Comments
ရှမ်းကိုးမီး ( Shan Koe Mee )ကို စနစ်ကျကျ ဘယ်လိုဆော့ရမလဲ? မြန်မာရဲ့လူကြီးလူငယ်မရွေးနားလည်ပြီး လူဆော့အများဆုံးဖဲကစားနည်းဆိုရင် “ ရှမ်းကိုးမီး “ ကိုပြေးမြင်ကြမှာအမှန်ပါပဲ။ လောင်းကြေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် အပျော်သဘောပဲဖြစ်ဖြစ် ကစားရတာ လွယ်ကူပြီးနားလည်ရလွယ်တာကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံနေရာအနှံ့အပြင် အခြားအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကပါ စိတ်ဝင်စားလာကြပါတယ်။ သို့သော်လည်း ရှမ်းကိုးမီးကိုကစားဖို့အတွက် တိကျတဲ့ Rule ဆိုပြီးသတ်မှတ်ထုတ်ပြန်ထားတာမရှိတဲ့အတွက် တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးလက်ဆင့်ကမ်းပြီးဆော့ကစားလာတာ ကြာလာတဲ့အခါမှာတော့ စည်းမျဉ်းတွေကလဲ တဖြေးဖြေးသွေဖယ်ပြောင်းလဲလာသလို…
3 Card Poker(Singapore)
Khin Hsu September 6, 20192Comments
ဒီတစ်ခါပြောပြချင်တာကတော့ စင်ကာပူပြည်တွင်းကစားနည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့3Card Poker ဆိုတဲ့ကစားနည်းအကြောင်းပါ။ အနောက်နိုင်ငံတွေမှာလည်း ကစားကြပေမယ့် အရမ်းခေတ်မစားပါဘူး။ ဒီကစားနည်းဟာ ကစားရလွယ်ကူပြီး အပျင်းပြေတဲ့အတွက် သက်ကြီးရွယ်အိုအများစုဟာ ပိုမိုကစားလေ့ ရှိပါတယ်။3Card Poker ဆိုတဲ့နာမည်အတိုင်း ဖဲသုံးချပ်နဲ့ကစားရတာဖြစ်ပြီး ဒိုင်ရဲ့ဖဲသုံးချပ်နဲ့ မိမိဖဲသုံးချပ်ကိုယှဉ်ကာ အနိုင်အရှုံးသတ်မှတ်ပါတယ်။ လျော်ကြေးငွေသည် ၁ဆဖြစ်ပြီး Bonus ဆိုသော လောင်းကြေးလည်းရှိပါတယ်။ Bonus ကတော့…
ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူတွေတော်တော်များများဟာ အနိုင်ရရှိခြင်းကိုပဲလိုလားကြပါတယ်။ ဒီလိုပဲ ငွေကြေးနဲ့ရင်းပြီးကစားကြတဲ့ ကစားဝိုင်းမှာ လူတိုင်းအနိုင်လိုချင်ကြတာ အပြစ်တော့မဆိုသာပါဘူး။ ငွေကြေးနဲ့ရင်းရတဲ့ ကစားနည်းများဟာ အနိုင်ရရှိဖို့ ကံ၊ ဉာဏ်၊ ဝီရိယ လိုအပ်ပါတယ်။ ကံတရားကိုပဲ မျက်စိမှိတ်ပုံအပ်ရတဲ့ ကစားနည်းတွေရှိသလို ကံတရားနည်းနည်းနဲ့ ဉာဏ်ကိုလွှာသုံးပြီး အနိုင်ရရှိနိုင်သော ကစားနည်းကိုပြောပါဆိုလျှင်တော့ Blackjack ကထိပ်ဆုံးမှာရှိနေတာအမှန်ပါ။ Blackjack ရဲ့အခြေခံသဘောတရားနဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအချို့ကိုလည်း BlackJack ကစားနည်း ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ရေးသားခဲ့ဖူးပါပြီ ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့…